Akụkọ - Shopify na-agbanwe Egwuregwu eCommerce
Shopify na-agbanwe Egwuregwu eCommerce
Onye na-agbanwe egwuregwu na ụwa nke eCommerce, ọ bụghị ọzọ karịa ikpo okwu Shopify.
N'ụzọ bụ isi, ngwa ịzụ ahịa na-agbakọ ahụmịhe ịzụ ahịa mkpanaka niile, ya bụ, nchọta, ịkwụ ụgwọ, na nnyefe n'otu ngwa. Ndị ahịa na-eji ngwa email abanye na ngwa ahụ, na-eso ụdị dị iche iche Shopify-kwadoro nke na-emepụta nri akụkọ ahaziri iche nke ngwaahịa akwadoro.
Ha na-eme nhọrọ nke ngwa ahia, gaa n’iru na elele ma obu mbufe ya. N'ezie, Shopify bụ ngwa ịzụ ahịa ekwentị zuru oke ugbu a, na Shopify ọrụ mmepe weebụ na-aga n'ihu.
Onye Kachasị Storelọ Ahịa N'ịntanetị
Echere Shopify dị ka ikpo okwu eCommerce kacha mma n'ahịa taa.
Ezubere iji nyere ndị mmadụ aka iwulite ụlọ ahịa, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị yana ọtụtụ narị atụmatụ ya arụpụtara na ọtụtụ ngwa, Shopify bụ usoro ịzụ ahịa achọkarịsịrị taa. Na-ere ngwaahịa na ọrụ ozugbo na weebụ, gafee mgbasa ozi mmekọrịta na ahịa dị iche iche dị mfe na Shopify.
Mgbe ịmalite azụmahịa eCommerce, enwere ọtụtụ ihe ị ga - echegbu onwe gị, gụnyere ịnweta ahịa-ahịa kwesịrị ekwesị, ịkọpụta ngwaahịa, njikwa ngwa ahịa, na ịme atụmatụ ahịa.
Ọ bụrụ na ịzụlitebeghị ahụmịhe gị, tụlee ịhapụ onye ọkachamara, dịka ụlọ ọrụ mmepe Shopify na-ahụ maka mmepe akụkụ nke ihe. Inye ndị nrụpụta na-enye gị ohere itinyekwu oge n’ịkpụzi akụkụ ndị ọzọ nke azụmaahịa ahụ.
Na-igbe, ikpo okwu bụ ihe kachasị ike webụsaịtị eCommerce. O nwere ihe niile ị nwere ike ịchọrọ maka ịtọlite ​​na ijikwa azụmahịa gị. Ọtụtụ ụlọ ahịa brik na-ngwa agha na-agagharị n'ịntanetị, ebe ụdị eCommerce ndị a ma ama na-emepe ụlọ ahịa brik na-ngwa agha.
Na eCommerce taa, ọ dịghị ihe dịka afọ iri gara aga. Onye ọ bụla nwere azụmahịa na 21st narị afọ nke ọma maara banyere Shopify. Agbanyeghị, n'agbanyeghị na ọ juputara ebe niile, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole ghọtara nnukwu nlọghachi na ntinye ego ọ na-eweta.
Ndị guzobere ikpo okwu, n'ihi na ọ dị mkpa ka ha mepụtara ya mgbe ha chọpụtara na nhọrọ eCommerce dị ugbu a ezughị maka ire. Ha weputara Shopify nwere usoro ihe eji emeghe ihe. Kemgbe ahụ, ọ tolitela ikike ya ịgụnye atụmatụ dịka njikọ aka nke ndị ọrụ, ịre ahịa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Zụọ ahịa, gịnị ka ọ bụ?
Na mkparịta ụka eCommerce na mkparịta ụka ahịa n'oge a, Shopify bụ otu n'ime azịza a na-ewetakarị.
Onye ọ bụla nabatara nkwekọrịta, mana ọ bụ naanị mmadụ ole na ole ghọtara ngwa ọrụ nke ikpo okwu. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Shopify bụ ụlọ nke ngwaahịa maka ebe ị na-ere n'ịntanetị na azụmahịa eCommerce.
Ọ bụ ikpo okwu nke na-enyere ndị nwere obere mmefu ego aka ịbanye na gburugburu eCommerce, na-enye ndị nwere oke mmefu ego aka ịzụlite akara ha, yana ikekwe kachasị mkpa, na-ekwe ka ụlọ ahịa anụ ahụ jikọta ọdịiche dị n'etiti azụmahịa nke mmadụ na ire ere n'ịntanetị, site na Shopify's proprietary POS system.
Maka otutu azụmaahịa dị iche iche, Shopify bụ ọtụtụ ihe, yabụ ọ gbasaala n'etiti azụmaahịa na ịntanetị na-aga nke ọma n'ime afọ iri gara aga.
Enwere ike ịbawanye ngwaahịa na ọrụ ya na azụmaahịa ọ bụla. Ahịa dijitalụ, nyocha, ahịa anụ ahụ, tiketi tiketi, nkuzi, mgbazinye, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ-Shopify bụ ụlọ ahịa na-akwụsị maka ihe niile eCommerce.
Maka ndị na-achọ ịbụ ndị ọchụnta ego na ntanetị, nke a na-adọrọ adọrọ.
Kedu ihe kpatara eji ewu ụlọ ahịa?
Mkpa na mkpa maka mmepe Shopify etolitela na mmụba na oke. Ikpo okwu a abụrụla nhọrọ kachasị mma maka ndị na-ere ahịa na-aga maka ịdị mfe na njirimara bara ụba na ijikwa ụlọ ahịa eCommerce ha. Shopify na-abịa na uru ndị a:
1. Mara mma.
Ikpo okwu nwere plethora nke ndebiri ọgbara ọhụrụ na nke ọkachamara iji wuo ụlọ ahịa dị n'ịntanetị mara mma. Ọ bụ ezie na ọ na-abịa na isiokwu efu, na-arụ ọrụ na Shopify isiokwu mmepe na-emepụta na mmepe ga-eme ka baa ọgaranya ọrụ na njirimara ọrụ ndị ọbịa.
2. Mfe ojiji.
N'adịghị ka azịza eCommerce ndị ọzọ, Shopify enweghị nsogbu ọ dịkwa mfe ịtọlite ​​na onye ọrụ maka ma ndị mmepe ma ndị na-abụghị ndị mmepe. Ọ na-enye ngwanrọ na nnabata iji wepụta weebụsaịtị. Ọzọkwa, njikwa ha na onye ọrụ nwere omume enyi na onye nwere nghọta.
3. A pụrụ ịdabere na ya ma nọrọ ná nchebe.
Iwulite na ijikwa ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke na-ahụ maka ozi njirimara dị nro, dị ka nkọwa onwe onye na ozi kaadị akwụmụgwọ, dị ka ọchụnta ego ị ga-achọ ka ọ bụrụ ntụkwasị obi ma nwee ntụkwasị obi. Shopify nabatara ndị a site na nlekọta na nkwalite oge niile.
4. Njikọ ngwa.
Platformlọ ahịa ịzụ ahịa na-enye gị ohere ịhazi ụlọ ahịa gị n'ịntanetị n'ụzọ dị mfe, yana iwekọta ngwa, na-enyere aka ịgbakwunye atụmatụ na arụmọrụ bara ụba iji bulie ya.
5. Ọsọ Ọsọ.
Uru ọzọ dị na Shopify bụ ọsọ ọsọ ya n'ihi akụrụngwa kachasị mma na ngwanrọ. Oge ị na-akwụ ụgwọ nwere mmetụta dị mkpa na njedebe, ebe ndị ahịa na-ahapụkarị saịtị nke na-ewe ihe karịrị sekọnd anọ iji kwado. Yabụ, ọ dị mkpa ịga maka ngwọta akwadoro ngwa ngwa.
6. Pụtara ìhè ahịa ngwá ọrụ.
Shopify na-enye ụfọdụ ahịa ahịa yana ịzụlite azụmaahịa. Versiondị nke isi na-enye ọtụtụ ngwaọrụ nchịkọta dị mma na atụmatụ SEO. Ọzọkwa, ọ na-enye atụmatụ dịka Kupọns ego, ọnụ ọgụgụ ụlọ ahịa, ahịa email, kaadị onyinye, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Kedu ihe kpatara Platform dị ka Shopify bụ ọdịnihu nke eCommerce
A na-atụ anya ire ahịa eCommerce zuru ụwa ọnụ ihe ruru ijeri $ 5 n'ime afọ a ma ọ bụ nke na-esote. Onu ogugu a na-egosiputa uto nke 265 percent ma e jiri ya tụnyere 2014. Enwere ike ikwu na uto a na ohere ohuru ohuru uwa.
N'afọ sochirinụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20 pasent nke ire ere eCommerce ka a ga-ekwu na ndị ahịa si mba ofesi. Otu ihe a na-aga maka isi ahịa ụlọ ka ịntanetị na-emebi oke ọdịnala yana nkewa mpaghara. Ndị ahịa ugbu a nwere ike itinye aka na ụdị mba ọzọ dịka ọ dịtụbeghị mbụ, n'ihi eCommerce.
Azụmaahịa na-aga n’ihu, ọ chọrọ ngwa ọrụ siri ike iji kwado uto na-enweghị atụ. Ugbu a, Shopify na Shopify ngwa mmepe bụ nnukwu asọmpi nkịta na ụwa nke eCommerce, mana enwekwara ndị ọzọ. Ka o sina dị, ihe na-eme ka ọ pụta ìhè na ihe na-eme ka ọ pụta ìhè n'etiti ndị ọzọ bụ ntụgharị ya.
Ahụmịhe eCommerce ejikọtara na-adabere na ihe ịga nke ọma nke ihe dị iche iche. Ihe ọ bụla ị na-ere, ma ọ bụ site na ụlọ ahịa gị ma ọ bụ ụlọ ala gị, eCommerce bụ nnukwu nhazi. N'akpa uwe dị omimi nke na-akpaghị aka na azụmaahịa na-adịgide adịgide adịghịzi adị n'oge a.
Thesebọchị ndị a, akara ngosi, usoro aghụghọ, yana omume ọmịiko ọmịiko nwere ike ibuga azụmahịa ọzọ. Ebe e si nweta ya na nyiwe dịka Shopify, ihe nbanye n'ime ụwa eCommerce dịtụbeghị ala. Onye ọ bụla nwere ụkpụrụ ọrụ siri ike, ezigbo echiche, na ntakịrị chioma nwere ike ịga nke ọma n'ahịa n'ịntanetị.
Nnukwu Ohere ndị na-eme ka ịzụ ahịa ọdịnihu nke Shopify
Ọganihu Mba Nile
Agbanyeghị na ikpo okwu ịzụ ahịa nwere arụmọrụ na mba 175 gburugburu ụwa, ọ nwere ike ịbụ ihe ijuanya maka ndị na-etinye ego ịmara na imirikiti ahịa na-adị na North America. Companylọ ọrụ a na-agbasi mbọ ike ịgbasa ọrụ ya na mba ụwa, yana ịnye ngwaọrụ dị iche iche maka ebe ahịa zuru ụwa ọnụ.
Taa, Shopify dị na asụsụ 20 dị iche iche na ịkwụ ụgwọ Shopify amụbaala na mba iri na ise. Ná ngwụsị afọ gara aga, ọtụtụ ndị ahịa na ụwa malitere azụmahịa ha na Shopify.
Shopify mezue Network mezuru naanị afọ gara aga, mana njirimara niile na-egosi na ọdịnihu maka netwọkụ na-egbuke egbuke. Ọtụtụ narị puku ndị ahịa egosila na ha chọrọ ịbụ akụkụ nke usoro mmemme ahụ. Shopify kemgbe ahụ emeela usoro a tụrụ atụ, na-agbakwunye naanị 'ọtụtụ ndị ahịa' ma na-elekwasị anya n'ịdị arụmọrụ karịa oke na mmalite oge.
Afọ a ga - abụ 'nnukwu ego' maka Shopify, ebe ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-atụle itinye ego na Shopify ngwọta.
Ọrịa Coronavirus na-efe efe, ebe ọ na-akwụsị ọtụtụ azụmaahịa ma na-emetụta ọtụtụ nde ndị ọrụ n'akụkụ ụwa niile, ndị mmadụ ahụla ohere ịme azụmahịa na ntanetị, ebe a na-etinye mgbochi na njikwa oke oke. Site na mkpa ndị mmadụ nọrọ n'ụlọ, ịzụ ahịa n'ịntanetị abawanyela.
Post oge: Ọgọstụ-28-2020